Pitsky Dog Breed Ama: Pitbull Husky Na-agwakọta - Reeddịrị
Pitsky Dog Breed Ama: Pitbull Husky Na-agwakọta
Pitskies na-abịa n'ụdị na nha. Fọdụ na-adị ka nne ma ọ bụ nna ha Pitbull, nwee uwe dị mkpụmkpụ ma ụfọdụ yikwara nne na nna ha Husky, nwere akwa mkpuchi abụọ.
Pitsky bu onye nwere obi ojoo, igwuri egwu na ihunanya nke American Pitbull Terrier na ma obu Siberia Husky ma obu, nke n’adighi, Alaskan Husky (obughi Alaskan Malamute).
Dika ụdị agwakọta a nwere ike ịbụ obe n'etiti Pitbull, yana Siberia ma ọ bụ Alaskan Husky, oke ha nwere ike ịdị iche iche. Ha na-esite na 30 ruo 70 lbs dị arọ na ebe ọ bụla n'etiti 19-21 'ogologo; yiri nha ka a Blue Imi Pitbull .
A Pitsky bụ enyi na enyi, na-ahụ n'anya ma na-egwuri egwu. Ha nwere ọgụgụ isi na egwuregwu mana ha nwere ike isi ike ma sie ike ọzụzụ.
N’isiokwu a anyị ga-ahụ ebe Pitsky nwere ọgụgụ isi na isi ike a siri bịa, ihe ndị mụrụ ya dị ka ya na ihe ị na-ahapụ onwe gị ma ọ bụrụ na ị họrọ inwe ya.
Adabara Ezinụlọ Ndị Na-enweghị Ọrụ - Ha nwere omume enyi ma nwee mmetụta ịhụnanya ma na-eso ezinụlọ ha arụ ọrụ
Nha N'etiti 19 ″ ruo 21 ″
Ibu ibu N'etiti 30 ruo 70 pound
Afọ ndụ 12 - afọ 15
Agba dị iche iche Kpamkpam Pụrụ Iche
Iwe Ike dị elu, nke na-egwuri egwu, nke nwere mmetụta ịhụnanya, ọgụgụ isi, isi ike, na-ahụ n'anya
Arụ Ọrụ Level Elu - Nke mgbatị na nkeji iri isii kwa ụbọchị
Nri Nri Kwa .bọchị N’agbata calorie 600 - 1,400 kwa ụbọchị (calorie 20 kwa lb nke ibu)
Okwu Ahụike Ndị A Maara Hyperthyroidism, Allergies na Hip Dysplasia
Pitsky Dog Ama
Puitsky ụmụ nkịta
Nke mbu, American Pitbull Terrier
Pitbull Husky Mix mmadụ
Etu esi elekọta Pitsky
Ego Ole Ka Otu Pitsky Na-eri?
Ọdịdị Pitsky: Agba, Uwe na ejiji
Anyị nwere Pitsky ekele maka obe-ozuzu nke American Pitbull Terrier na ma onye Siberia ma ọ bụ na-adịkarịghị, Alaskan Husky.
Pitsky abụghị ezigbo nkịta. Ọ bụ obe n'etiti American Pitbull Terrier na ma Siberia ma ọ bụ Alaskan Husky.
Maka nke a, ndị American kennel Club amatabeghị ya. A na-azụkarị ha dị ka nkịta enyi na naanị n'ezie ghọrọ onye ama ama na 2014 .
Puitsky puppy, dị ka nkịta ndị ọzọ na-ese nkịta, nwere ọnụahịa dị oke ọnụ ahịa n'ihi ụdị okike ha. Ga-atụ anya ịkwụ ụgwọ ihe dị ka $ 500 na $ 2,000 maka otu n'ime nkịta ndị a; nke a anaghị agụnye ụgwọ nkịta kwa ụbọchị (dịka nri, ejiji na anụ ụlọ).
Ogologo oge ole ka Pitsky dị ndụ?
Ebe ọ bụla site na 12 ruo 15 afọ.
Kedu otu ikike Pitsky nwere?
A Pitsky toro eto ga-adị n'etiti 30-70 lbs na ibu na n'etiti 19-21 'elu. Femụ nwanyị ga-adịkarị obere karịa ụmụ nwoke.
Ego ole bụ ụmụ nkịta Pitsky?
Maka ezigbo nwa akwụkwọ ị nwere ike ịkwụ ụgwọ ebe ọ bụla n'etiti $ 500- $ 2000. Uzo nke onu ogugu a na-agwa anyi na ikwesiri ime ihe omume ulo gi ma oburu na ichoro nwa nkita, na-elezi anya izere ndi na-achi azu na ulo nkita. Maka enyemaka ndị ọzọ ịchọta ezigbo onye na-azụ ihe lee ndu anyi l'enwe .
Keduzi ebe nkịta a na-egwuri egwu ma na-anụ ọkụ n'obi si bịa? Iji nweta nghọta ka mma anyị ga-ele ndị mụrụ ya anya.
Pitties, ma ọ bụ olulu, bụ nkịta siri ike, nwere obi ike ma nwee obi ike.
Ha na-ahụ n'anya, na-eguzosi ike n'ihe ma na-erube isi. Uche ha dị elu na-eme ka ha nwee nrọ ịzụ na ụkpụrụ ọrụ ha na-eme ka ha bụrụ nkịta ọrụ dị egwu. Pitties na-ebu zest a maka ndu nke fọrọ nke nta ka ọ bụrụ na-efe efe - attentionaa ntị na ha, ọnụ ọchị ha ga-agbaze obi gị kpamkpam.
Ala ha? Ha na-eme nkịta na-eche nche dị egwu.
Pitties, site na okike, dị oke mma (belụsọ na ha abanyela n’aka ọjọọ), ha chere n’ezie na onye ọ bụla hụrụ ha n’anya. N'ihi nke a, ha anaghị aghọta ihe kpatara ị ga-eji hapụ ha. Igwe nwere ike ịta ahụhụ nkewa nchegbu na-ebute ogbugbo na mbibi.
Ya mere, anyị nwere onye enyi siri ike, onye nwere ntụkwasị obi na onye na-eguzosi ike n'ihe na Pitbull - ka anyị lelee nne na nna nke ọzọ. Ndi Husky.
Dịka anyị kwuburu na mbụ, Pitsky bụ obe n'etiti Pitbull Terrier na ma Siberia ma ọ bụ Alaskan Husky; yabụ ka anyị lee ndị Huskies ahụ anya.
Imirikiti mmadụ maara Husky dị ka nkịta snow. Ha bụ ndị a ma ama maka ụkpụrụ ọrụ ha. Ndi nkita a di egwu bu ndi mbu Ndị Chukchi ndị tụkwasịrị obi na Huskies ha na-ebuga ngwa ahịa.
Ekwenyere na aha 'Husky' sitere na aha 'esky' site na Eskimos. Onye American Explorer Rear Admiral Robert Peary bụ onye Siberia Huskies nyeere aka na njem ya na North Pole.
E wetara Huskies na Alaska na 1909 maka ịgba ọsọ sled. I nwere ike icheta 1995 Balto nkiri nke gosipụtara akụkọ akụkọ nke otu ìgwè ndị Siberia Huskies bụ ndị gbara ọsọ na 1925 ọbara. Ọrịa ọrịa diphtheria bụ n'ihi ikpochapụ Nome (obodo dị na Alaska) na naanị ọgwụgwọ ya bụ karịrị 1000 kilomita pụọ . O ji ụgbọ oloko kpuchie mmadụ 400 ahụ, mgbe ahụ ọ bụ ọrụ nke nkịta ndị sleded!
Ha bụ ezigbo nkịta, na-egwuri egwu ma nwee ịhụnanya. Uche ha na egwuregwu ha bụ nke abụọ.
Otú ọ dị, ha abụghị maka ndị dara mbà n'obi ma ọ bụ maka ndị nwe nkịta izizi . Huskies na-eme nke ọma mgbe ha na-arụ ọrụ - ma ọ bụ n'ugwu ma ọ bụ na-arụ ọrụ site na ụbụrụ ụbụrụ.
Ha anabataghị ịhapụ naanị ha ma ọ bụ na-agwụ ike. Ha gwu, gwusi ma tie nkpu. Ọtụtụ mgbe anyị na-eche ihe kpatara na akpọgharịghị ha aha Siberia Houdini - ha bụ ndị omenaala mgbapụ kachasị mma ... ha ga-awụpụ ụzọ ha, ma ọ bụ igwu.
Mba, anyị enwebeghị mgbagwoju anya na Alaskan Malamute - ha dịkwa.
Husky Alaskan abụghị nkịta dị ọcha, dị ka ngwakọta husky ndị ọzọ, ọ bụ ụdị agwakọtara nke ahịrị dị iche iche gụnyere:
Hounds - kpọmkwem Onye Ọzụzụ Atụrụ German
A na-echekarị Alaskan Husky dị ka ụdị nkịta karịa ụdị.
A zụghị ha maka mkpakọrịta, a na-azụ ha maka egwuregwu na ike. Ndị na-azụ anụ họọrọ àgwà ndị ha chọrọ na nkịta. Werefọdụ Alaskan Huskies ka a zụlitere maka ibute ibu dị arọ, ụfọdụ ka a gbapụtara maka ime ngwa ngwa ma ụfọdụ ka e mepụtara maka ịrụ ọrụ nke ọma ogologo oge. N'ihi nke a, Alaskan Huskies nwere ike ịdị iche n'ọdịdị na nha.
N'agbanyeghị ọdịdị ha dị iche, ha na-ekerịta ụdị àgwà ahụ na Siberia Husky.
Ha onwe ha bụkwa ndị na-egwu ala, ndị na-ata anụ na ndị na-eme mkpọtụ. Ha na-arụ ọrụ akụkọ ihe mere eme pụtara na ha na-agwụ ike ngwa ngwa. Ha chọrọ ije dị ogologo, ọtụtụ oge egwuregwu na oge nọrọ na-arụ ọrụ ụbụrụ ahụ.
Ya mere, ndị nne na nna Pitsky nwere omume enyi, na-ahụ n'anya ma hụ ndị mmadụ n'anya. Ka anyị hụ ma àgwà ndị a agafela.
Nkịta ndị a dị elu dị mma maka ezinụlọ ndị na-arụsi ọrụ ike; na-egwuri egwu, nwee mmetụta na-eguzosi ike n'ihe .
Pitbull Husky Mixes nọ na mmewere ha na-ejegharị n'ọhịa, naanị hụ na ị na-edobe ya na eriri ya; anyị maara na ncheta Husky abụghị ihe dị adị ma ọ dị nwute na ụfọdụ Pitskies ejidesiwo ụdị a.
Superdị omume ha dị mma na-eme ka ha bụrụ nkịta na-eche nche dị egwu ma ọ bụrụ na nke ahụ bụ ihe ị ga-eme, ị ga-achọ ụdị dị iche iche. Ha hụrụ ndị mmadụ n’anya. N'ihi nke a, ha aghọtaghị ihe kpatara ị ga - ahọrọ ịhapụ ha naanị. Poormụ ogbenye ndị a nwere ike ịta ahụhụ na nkewa na-akpata ọtụtụ mkpu na igwu ala.
Ọ bụ ezie na anyị nọ n'okwu banyere ịkwa ụja, dị ka ọtụtụ ndị nwe husky ga-agwa gị, husky ha anaghị ada ụja, ha na-eti mkpu.
Ọ bụ otu n'ime àgwà ha na-adọrọ adọrọ na ụfọdụ Pitskies edebekwara nke a. May nwere ike chọpụta na ha ga-eti mkpu n'ụda ụfọdụ na mmemme TV, ma ọ bụ ma ọ bụrụ na ụgbọala ice cream na-abịa gburugburu.
A maghị ụmụ nwoke a ka ha nwee ahụ iru ala ma nwee obi ụtọ ịnọdụ n'ụlọ na-emeghị ihe ọ bụla.
Ha ga-anọ nke kacha mma n ’ụlọ na-ekwo ekwo ebe ihe na-aga mgbe niile. Ọ hụrụ n'anya na-arụsi ọrụ ike, ma ọ bụrụ na ịnwere oge zuru oke iji zụọ ndị ọrụ a nwere ọgụgụ isi; ha ga-abụ ihe ntụrụndụ na-enye obi ụtọ, gbakwunye na ezinụlọ gị.
Ka nwaa? Ka anyị hụ ihe ọ ga-ewe iji lelee nkịta a kwa ụbọchị.
N'ihi nnukwu mgbanwe dị na pitskies nke anụ ahụ (dịka site na 30 ruo 70 pound), nri a tụrụ aro, ya mere calorific na protein chọrọ nwere ike ịdị iche n'ụzọ dị egwu na ikpe site na ndabere. Can pụrụ ịhụ nke a na kemfe chaatị n'okpuru:
Ihe dị ka calorie nke ụbọchị
33 n'arọ 1,000
44 n'arọ 1,250
55 n'arọ 1,500
66 n'arọ Bɛyɛ mfe 1,700
Igwe dị elu ga-agba mbọ hụ na nkịta gị kwa ụbọchị ekwuru ihe oriri na-edozi ahụ . Dịka onye ndu, mgbe etolitere n'ụzọ zuru oke, nri ya kwesịrị ịgụnye gram 1,20 nke paụnd kwa kilogram na kilogram 0.72 na abụba paụnd.
Anyị maara na carbohydrates dị obere karịa protein na abụba mana ha ka bụ ezigbo isi iyi nke ike:
Nkịta gị na-eji protein eme ihe maka uto na mmezi ahụ
Abụba bụ isi iyi ike nke nkịta gị
A na-eji carbohydrates maka starches dị mfe dị ka isi iyi ike
Lekwasị anya na ịdị arọ nke nkịta gị - ị ga-enwe ike ịnụ ọgịrịga ya yana site na nnụnụ, ọ kwesịrị inwe akara ngosi hourglass.
Ihe na-adọrọ mmasị banyere nkịta sled bụ ume na ntachi obi ha. N'agbanyeghị na-agba ọsọ ọtụtụ narị kilomita kwa ụbọchị karịa ọtụtụ izu, nkịta sled adịghị erute otu ike ọgwụgwụ na mmadụ ga-anọ n'otu ọnọdụ ahụ. Maka ebumnuche ụfọdụ, nkịta sled anaghị eri nri n'ime ume ha dịka ụmụ mmadụ na-eri ma na-atụ aro ka nri abụba dị elu nyere aka na nke a. Nke a na - ewelite isi ihe na - adọrọ mmasị banyere nri achọrọ gị Pitsky ma ọ bụrụ n’ezie ọ jigidere ọtụtụ ụdị Husky.
N'ihi ihe nketa ha Husky, Pitbull Husky Mix bụ ike dị egwu. Ha hụrụ ije ha n'anya, mana cheta idobe ha na ọdụ. Ihe ncheta ha hapụrụ ọtụtụ ihe anyị chọrọ ma anyị ga-enwe nchebe karịa nwute.
Na-atụ anya na-emefu ihe karịrị 60 nkeji ụbọchị na-eje ije ha .
Ha na-enwe mmekọrịta enyi na enyi, ọ bụrụ na ha na-emekọrịta ihe site na nwata, yabụ ha ga-eji obi ụtọ mee enyi na ogige nkịta.
Mara na nkịta nwere ike ịkpa àgwà dị iche iche mgbe ị na-akwụ ụgwọ, na-atụkwu egwu karịa nkịta ndị ọzọ n'ihi na ha anaghị enwe ike ịgbapụ ma ọ bụrụ na ọ dị ha mkpa. Lelee maka asụsụ ha ; aru siri ike, odu siri ike ma obu ilegide anya nke oma.
Nke a nwere ike na-egosi na ị nwere obi ụtọ pooch na ị chọrọ iji wepụ ya na ọnọdụ; dọpụ uche ya ma jiri nwayọọ pụọ.
Nkịta nwere ike igwu egwu ọzọ karịa ụdọ, mana bụrụ ihe ezi uche dị na ya; O doro gị anya na Pitsky gị agaghị agbakọ ogige ahụ? Ọ̀ ga-abịaghachi na nke gị ma ị kpọọ mmadụ? Ka a ga-anọdụ ala ebe ahụ ruo mgbe anyanwụ dara na-eche ya ka ike gwụ ya?
Ikwu maka ahuokika, ka anyi lee ka anyi si edebe nwa agbogho a.
Anyị maara na nkịta na-aza ihe kacha mma nkwalite dị mma na ụgwọ ọrụ dabere na ọzụzụ; Pitsky adịghị iche.
Mgbe ị na-akpọlata nwa nkịta gị n'ụlọ, jụọ onye na-azụ ya ka ị hụ ụdị mmemme ha nwere. Ọ dị mkpa ịga n'ihu na mmekọrịta a ka ọ na-eto.
Anyị maara na nkịta ndị ahụ gosipụtara na ahụmịhe na ndị mmadụ n'oge oge mmekọrịta ha n'etiti izu 3-12 na-anakwere otu ahụmịhe ahụ na ndị mmadụ ka ha na-aka nká.
Ndị nkịta na-emeghe mmekọrịta ha na ndị ọzọ na gburugburu ha ebe ha na-enwebeghị ihe kpatara ha ga-eji kwere na ha ekwesịghị. Ikwesiri idebe ya n'ụzọ ahụ. Mee ka ahụmịhe ha dị mma ma dịkwa nchebe. Nyeghachi ha otuto ma too ha.
Gosiputa ha nye ndi mmadu, umuaka, ngwa na ngwa ogu. Chọpụta ebe ọhụrụ, zute nkịta enyi na enyi. Buru n'uche na nne nne na nna nwere nnukwu anụ ọ ga-eri; iwebata nwa gị Pitsky ka nwamba na obere furries ndị ọzọ ma nyere ha aka ịmụta na ha abụghị maka ịchụ.
Iji mee nke a, anyị na-akpọ ya deensitization. Enweghi ikike bụ ebe ị na-akụziri nkịta ka ọ ghara imeghachi ụjọ, iwe ma ọ bụ obi ụtọ na mmadụ ma ọ bụ ihe.
N'akụkụ ihe a na-eme ka anyị ghara ịkụzi ihe. Nke a na-akuzi akparamagwa ohuru n'ọnọdụ nzaghachi ụjọ, mmekpa ahụ ma ọ bụ nke obi ụtọ.
Malite site na ịchọta otu nwamba n'ebe dịtụ anya. Echiche bụ na ị na-adọpụ nkịta gị ụgwọ ọrụ ma ọ bụ otuto maka ogologo oge nkịta gị anaghị azaghachi pusi, ị na-akwụghachi ụgwọ ma na-abịarukwu nso.
Nke abụọ ọ na-aza na-ekwesịghị ekwesị ihe atụ; barks ma ọ bụ akpa ume, ị na-aga n'ihu pụọ ọzọ.
Gaa n'ihu usoro a na nkuzi ọzụzụ dị mkpirikpi ruo mgbe nkịta gị ga-ahụ nwamba, na nso nso ma leghara ya anya; na-ele anya gị maka ụgwọ ọrụ ma ọ bụ otuto.
Ozugbo nke a mere, ị nwere ike ịkpọ omume ahụ ebe ọ ka na-akwụghachi ụgwọ / ịja mma, dịka ọmụmaatụ 'eleghara anya'.
N'akụkụ ọzụzụ ha kwa ụbọchị, Pitskies ga-eme nke ọma na egwuregwu ụbụrụ. Ndị a ga-abụ ihe bara uru iji mee ka ọ pụọ na nsogbu.
Anyị ma na ndị Pitskies na-arịa ụfọdụ ụdị nsogbu ahụ ike nne na nna ha na-arịa.
Hyperthyroidism - nke a na-ahụkarị na nne na nna, nke a bụ ebe a na-emepụta ọtụtụ thyroxine site na gland thyroid nke na-emetụta metabolism nkịta. Ihe ndị na-egosi na nke a bụ ọnwụ ibu na agụụ na-arị elu.
Ahụhụ - Uzo a na-ahukari na udiri nne na nna, i gha achopu ntughari, icha aka na ichapu aru di iche iche. Nke a nwere ike ibute ndapụ ntutu, ọnya na ịchafu.
Hip Dysplasia - Huskies na-eburu ụzọ mee ka dysplasia hip; ya mere njupụta nke ọnọdụ ahụ na Pitskies. Nke a bụ mgbe enwere mmepe na-adịghị mma na nkwonkwo hip na-akpata mgbu na ngwụrọ. Ọ bụ ezie na hip dysplasia na-abụkarị ihe nketa, uto oke, ihe oriri na mmega ahụ nwekwara ike itinye aka na mmepe nke dysplasia hip.
Dịka anyị kwurula, nkịta a nwere ike ịbịa n'ụdị na nha niile; ekele maka nne na nna ya dị iche iche (dịka Siberia ma ọ bụ Alaskan Husky).
Dika ha bu ndi ozo, igaghi enwe ike ijide n’aka ihe ị gha enweta. Oge kachasị mma ị nwere bụ ile ndị mụrụ ya anya. Ma, ọbụlagodi nke a agaghị ekwe nkwa ma ị ga-enweta ihe Husky karịa Pitbull.
Pfọdụ Pitskies dị ka Huskies. Fọdụ dị ka Pitties. Fọdụ nwere uwe mkpụmkpụ dịka Pitties, ụfọdụ ogologo, uwe mkpuchi abụọ dị ka Huskies. Fọdụ dị ka hound ma ọ bụrụ na ha si na Alaskan Husky nwere akara mkpuchi.
Ha nwekwara ọtụtụ agba - Husky agba dị ka ọcha, ọcha na aja aja, oji na ọcha, isi awọ na ọcha na Pitty agba ndị dị ka acha anụnụ anụnụ, ọbara ọbara, brindle, fawn, tan na aja aja (lee onyogho dị n’elu). Ọzọkwa, ndị nne na nna ga-abụ akara ngosi kachasị mma.
Anya anụnụ anụnụ dịkarịsịrị na Pitbull Husky Mix ekele maka nne na nna Husky!
Uwe mkpuchi obere Pitty agaghị eji ejiji dị ukwuu, brushes abụọ n’izu ga-ezu.
Ogologo oge, uwe nwere okpukpu abụọ ga-achọ ịchacha ọtụtụ ụbọchị ma ha ga-enwe ọnya abụọ kwa afọ. Ọ bụ ezie na amaghị m ihe kpatara ha ji kwuo nke a, anyị niile nwere ndị nwe ya okpukpu abụọ maara na ọ bụ ezie na ha anaghị akwụsị ịwụfu ... mgbe ọ bụla.
Ntị ha nwere ike dị mkpụmkpụ ma nwee ntụpọ ma ọ bụ ogologo na floppy - naanị cheta ịlele ha oge niile. Yana anya ha na ntu. Soro ndị dọkịta gị na-aga nyocha mgbe niile, ha ga-elekwasịkwa ha anya.
Egwuru egwu Pitsky. Otu nkịta na-ahụ n'anya, nke na-ahụ n'anya ma dị nwayọọ nke na-asọpụrụ ndị mmadụ.
Pitbull Husky Mix a nwere ịnụ ọkụ n'obi na egwuregwu nke nwere ume na-adịghị ada ada.
Ha na-enwe mmasị n'ịrụsi ọrụ ike, mgbakwunye zuru oke maka ezinụlọ na-arụ ọrụ. Ha nọ na mmewere ha na-aga njem n'ọhịa ma ọ bụ na-agba mgba site na egwuregwu ụbụrụ kachasị ọhụrụ ụmụaka ụmụaka chepụtara.
Uche ha na-eme ka ha meghachi omume na nkwalite dị mma na ụgwọ ọrụ dabere na ọzụzụ, mana, ị ga-ebido n'oge a yana mmekọrịta ha.
Ekele dịrị nne na nna ha, ihe ncheta ha anaghị egbukepụ mgbe niile ma amaara ha maka mgbapụ mgbapụ ha. Echere m na ha echefubeghị akụkọ ihe mere eme ha na-agba n'ọhịa dịka nkịta sled. Ma ọ bụrụ na ị bụ onye na-ahụ maka nkịta nwere ahụmahụ, nwee oge iji zụọ ọzụzụ na imega ahụ anyị nwere ike ịkwado gị na ị gaghị enwe oge mmechuihu na isi nwa a.
You na-eche echiche ịnweta otu n'ime nkịta ndị a? Ma ọ bụ ị nwere ajụjụ ndị ọzọ? Nwere ike ikwu okwu n’okpuru.
Nweta ọla edo: Eziokwu iri na-enweghị atụ ị maghị
aha nkịta nwoke maka obere nkịta
obere aha nkịta aha nwoke
German onye ọzụzụ atụrụ na rottweiler mix
ego ole bụ ego nwa nkịta french bulldog